मोवाइल, ल्यापटपले बालबालिकाको आँखा कसरी कमजोर हुँदैछ ? प्रा. डा. सविना श्रेष्ठको लेख « 24 news times
अहिले धेरैजसो बालबालिका चस्मा पहिरिएका देखिन्छन् । आँखा चिम्लेर मनन गर्नुहोस् त, हिजोको पुस्ताले यतिविध्न चस्मा लगाएका थिए र ?
पक्कै थिएनन् । भन्नुहोला, त्यसबेला चस्मै कहाँ पाइन्थ्यो र ?
कुरा त्यसो होइन । हिजो दिनमा भन्दा आजको दिनमा हामीले आँखाको दृष्टि गुमाइरहेका छौं । हाम्रो आँखा प्रतिदिन कमजोर हुँदैछ । र, यसको सबैभन्दा बढी असर त साना बालबालिकामा परेको छ, जो बिहान उठ्नसाथ मोवाइल, ल्यापटप, कम्प्युटरमा तल्लिन हुन्छन् । भिडियो गेम, मोबाइल तथा कम्प्युटर लगायतका आधुनिक ग्याजेटको प्रयोगका कारण बालबालिकामा दृष्टि दोष (रिफ्राक्टिभ एरर) को समस्या धेरै हुने गरेको छ । दृष्टि दोषको उपचार समयमै नगरेको खण्डमा यसका कारण आँखा विग्रने सम्भावना धेरै हुने गर्दछ ।
मायोपियाको समस्या विभिन्न कारणले हुनसक्छ । कुनै बालबालिकामा जन्मजातै मायोपियो समस्या हुनसक्छ । त्यस्तै, कम्प्युटर, मोबाइल तथा भिडियो गेममा धेरै समय विताउने बालबालिकामा पनि मायोपियाको समस्या हुने गर्दछ । परिवारमा कसैलाई दृष्टि दोष भएमा उसबाट जन्मने बालबालिकामा पनि दृष्टि दोष अर्थात मायोपिया हुने सम्भावना धेरै हुने गर्छ । त्यस्तै, धेरै किताब हेर्ने बालबालिकामा पनि मायोपिया हुने सम्भावना उच्च हुने गर्दछ ।
त्यस्तै, जन्मजातै आँखा टेढो हुने बालबालिकामा पनि मायोपिया हुने सम्भावना धेरै हुने गर्दछ ।
-टाढाको वस्तु धमिलो देखिने